1050 / 1100 / 3003 Low Price Aluminum Disc - Sale Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd.
Fampahafantarana ny Aluminium Disk
Ny aliminioma dia ampiasaina betsaka amin'ny electronics, kosmetika, pharmaceutika, kolontsaina ary ny fanabeazana sy ny fiara mandeha amin'ny fiara, fitaovana elektrika, fananganana, famokarana machinery, fiara, fiaramanidina, milina, milina, fanorenana, printy ary indostria hafa. Toy ny fitaovana fanatanjahan-tena toy ny tsy misy fanaka, fitaovam-pandaminana sy fitaovana hafa an-tsokosoko toy ny fantson-drano, fantson-drano, fitobiam-bary. Ny takelaka aluminio no lehibe indrindra amin'ny ala-tavoahangy alimo ary manodina ny dingana lehibe amin'ny vokatra.
Aluminum Disc Quality Control:
Aluminum disk Surface Finish: Bright & smooth surface, without flow lines, slightly oiled to avoid white rusting.Smooth, Brightly, No Zone of Breakthrough, No Scratched, No Oil Sludge
Manana laza tsara eo amin'ny mpanjifantsika isika amin'ny alikan'ny aluminium misy ny vidiny avo lenta sy ny fifaninanana, mandresy ny fankasitrahana avy amin'ireo mpanjifantsika miaraka amin'ny sambo mahomby sy ny fahaiza-manao matihanina. Ny kalitao dia mifanaraka amin'ny rafitra fitantanana kalitao ISO 9001.
Famolavolana ny alimanota Aluminium
• Ny takelaka vita amin'ny rindrin'ny milina Rolling dia mety lava lavitra noho izany dia apetaka amin'ny antsasa-manilan'ny SHEARING MACHINE ireto taratasy ireto.
• Aorian'ity dingana ity, ny tapa-taratasy dia tapaka amin'ny Aluminium DIsk amin'ny CIRCLE CUTTING MACHINE.
• Rehefa tapaka ny Aluminium Disk, dia averina any amin'ny lafaoro fanamafisam-peo izy mba hahatonga ilay faribolana ho malefaka ary tsy hanimba ny dingana hafa ho avy.
Karazana: rakitra aluminio
Product name: 3003 Low Price Aluminum Disc In Sale
Anarana: 3003 Aluminium Disk
Alloy: Aluminium 3003 Aluminium
Famaritana: Aluminium Disk